★မြန်မာ့အလင်း★: လိမ်တဲ့ မြအေး
မူဆလင်မြအေးသည် ၈၈၈၈ တုန်းက ကျောင်းသားတဦးမဟုတ်တော့ပါ။ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံအတွင်း မြအေးဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ . . . . . မြအေးဘာမှမလုပ်ပါ။ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံတုန်းက ပေါ်ထွက်လာသော ကျောင်းသားများဖြစ်သော မင်းကိုနိုင်နှင့် မိုးသီးဇွန် တို့ကို ၈၈၈၈ တုန်းက မြအေးအမည် ကြားဘူးသလား၊ မြအေးနှင့် လက်တွဲ လုပ်ဘူးသလားဟု မေးလျှင်တူညီသော အဖြေထွက်ရှိမည် ဖြစ်သည်။ အဖြေကတော့ နိုးဆိုတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးသီးဇွန်ကတော့ အခုသူများရောင်လို့ နည်းနည်းရောင်ချင်နေသည်။ ဒီနေရာကနေ အကြံပေးချင်တာကတော့၊ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ပြန်မေးကြည့်။ ငါ၊သူ့ကို ၈၈၈၈ တုန်းကကြားဘူးလား . . . နိုး။ ငါသူနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဘူးလား . . . . . နိုး။ ခဏခဏရွတ်ပြီးကိုယ်ဘာသာ ကိုယ်မေးသင့်ကြောင်းအကြံပြုချင်ပါတယ်။
၁၉၈၉ က ထောင်ထဲရောက်တဲ့ မြအေး၁၉၉၆ မှာ ထောင်ကလွတ်တယ်။ ကြောက်လန့်သွားပြီး ၁၁ နှစ်လုံးလုံးငြိမ်နေတယ်။ ၂၀၀၆ ကုန်ခါနီး (သို့) ၂၀၀ရ အစလောက်ထင်တယ်၊ ဝေနှင်းပွင့်သုန် အင်္ဂလန်ကို စာသင်ဖို့ပို့တယ်။ အင်္ဂရောက် ဝေနှင်းပွင့်သုန်က အများနည်းတူဘဲ တရားဝင်နေလို့ရအောင်၊ မြအေးတို့ပါတီထောင်ကတည်းက ပိုက်ဆံထောက်ပံ၊ ချိတ်ဆက်ရှိတဲ့ ယူကေ ကမူဆလင်တွေအကူအညီနဲ့ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လုပ်တယ်။ ၁၉၉၆ ကတည်းက ၁၁ နှစ်လုံးလုံး ငြိမ်နေခဲ့တဲ့မြအေးက ၂၀၀ရ မှာ သမီးနိုင်ငံရေးခိုလှုံတာကို အဆင်ပြေအောင်၊ သက်သေပြလို့ရအောင်လို့ ၈၈၈၈ ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးနဲ့ ပူးတွဲတွဲလုပ်တယ်။ မြအေးမှာ ကိုကိုကြီးနဲ့ တွဲရိုက်ထားတဲ့ အဲဒီဓါတ်ပုံလေးဘဲ၊ မူဆလင်တွေအခုသုံးနေကြတာ၊ စစ်အစိုးရက မြအေးကို ကိုကိုကြီးတို့ နဲ့ရောပြီး ထောင်ထဲပြန်ထည့်တယ်၊ ဝေနှင်းပွင့်သုံက သူ့ကြောင့် သူ့အဖေထောင်ထဲရောက်တယ်ဆိုပြီး ယူကေ မူဆလင်အသင်းထောက်ခံချက်နဲ့ ဘားမားကင်းပိန်းယူကေမှာ ၀င်လုပ်တယ်၊ မူဆလင်တော်တော်များများနေရာယူထားတဲ့ အဲဒီအသင်းမှာ ရှိတဲ့ ဖဒိုမန်းရှာသမီးကို ကျော်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာ တော်တော်ကြာပြီ၊ ဦးမန်းရှာသမီးက တော်လှန်ရေးနောက်ခံကောင်းတော့ တော်တော်နဲ့ မရရှာဘူး။ ဒီတကွေ့မှာတော့ အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်း မပြောနိုင်တဲ့ ၈၈ ဘလော့ဂါတွေ တင်ပေးလိုက်တာ နေရာရနေတယ်ဆိုရမှာ . . . . လေအကျိုးပြုတယ်ဆိုရမလား။ လေနဲ့လုပ်စားသွားတာ၊ သူတင်ထားတဲ youtube ရဲ့၈၀ ရာနှုံးက သူတို့ဘာသာသူတို့ ရိုက်ပြီးအင်တာဗျူးသလိုတင်ထားတာ၊ သေသေချာကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်။
☀ ၁၉၈၈ မှာ မြအေးကျောင်းသား မဟုတ်တော့ဘူး၊ ဘာလှုပ်ရှားမှုမှ ဦးမဆောင်ဘူး၊
☀ ၁၉၈၉ မှာမြအေးနဲ့ မူဆလင်တစုပေါင်းပြီး ဘွဲ့ရ ကျောင်းသားများဆိုပြီး ပါတီဖွဲ့ ရွေးကောက်ဖို့ကြိုးစားရာမှ၊ ကျောင်းသားဆိုယင် ကြောက်လို့ ချေးယိုတဲ့ နအဖက မြအေးကို ဆွဲစိလိုက်တယ်။
☀ ၁၉၉၆ မှာပြန်လွတ်တယ်။ ၁၁ နှစ်လုံးလုံး ဘာသံမှမကြားရဘူး။
☀ ၂၀၀၆ နှစ်ကုန် (သို့) ၂၀၀ရ ဆန်းလောက်မှာ ဝေနှင်းပွင့်သုန် UKသွားကျောင်းတက်ရာမှ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် လျှောက်တယ်။ အင်တာနက်မှာ ဘယ်သူရိုက်ထားမှန်းမသိတဲ့ သူမရဲ့ အင်တာဗြူးစကားပြောနေတာတွေ တက်လာတယ်။ အဖေတူ သမီးဆိုတဲ့ အင်တာနက်ဘလောဂါ ကြော်ငြာတွေ ထွက်လာတယ်။ တချိန်တည်း မြအေးကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ အကောင်ဆုံးဆုကို ဘားမားဒိုင်ဂျက်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့တခုက ဆုပေးတယ်ဆိုတာ အင်တာနက်မှာ ပြန့်လာတယ်။ ဒီနေရာမှာ သူနဲအကြိုက်အနယ်ပြိုင်ပြီး ခွက်ခွက်လန်ရှံးတဲ့သူတွေ ကြည့်နိုင်တယ်
☀ ၂၀၀ရ မှာ ဝေနှင်းပွင့်သုန်နိုင်ငံရေးခိုလှုံရေး လျောက်ထားစဉ် ကာလဘဲ မြအေးဗြုံးတိုင်းကြီးပေါ်ထွက်လာပြီး၊ ၈၈၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးနဲ့ရော၊ ရောလုပ်တယ်။ ရှားရှားပါးပါး၊ ကိုကိုကြီးတို့ပါတဲ့ မော်ကွန်းတင်စရာ ဓါတ်ပုံလေးတပုံရိုက်ထားတာ မူဆလင်ဝက်ဆိုဒ်နဲ့ တချို့ဘလော့တွေမှာ ပြန်လာတယ်။ မြအေးကို ၈၈ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ပါဆိုပြီး အင်တာနက်မှာ ဖြန့်လာကြတယ်။ ကိုကိုကြီး အဖမ်းခံတော့ မြအေးလဲကပ်ပြီးပါသွားတယ်။ မြအေးအဖမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်း ဝေနှင်းပွင့်သုန် နိုင်ငံရေးစာစောင်တွေမှာ ကြိုကြားကြိုကြား တွေ့လာရတယ်။
★ Ko Mya Aye, Burmese Muslim 88 Students Group Leader
★ ဒီမိုငတုံးနှင့် ကလိမ်ကကျစ်ဗိုလ်ချုပ်တပည့်များ သိမှတ်စရာ
★ ဒီမိုကရေစီကိုအလိုချင်ဆုံးက မွတ်ဆလင်သာဖြစ်တယ်
★ ဒီမိုတို့အတွက် ခေါင်းဆောင်သစ် (သို့မဟုတ်) မြအေးသမီး
★ မလည်ရှုပ် ဦးအောင်သိန်းလင်း မွှေးတဲ့မီး
★ Mya Aye (Wikipedia)
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 12:02 AM
တချို့ မသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက
ကိုမြအေးက မဲအများဆုံး=ဒေါ်စုထက် မဲပိုရနေတာ
တုန်းက။အဲဒါ ကျနော် အသေးစိပ်စုံစမ်းပါဦးမယ်။
အင်္ဂလန်က လူတွေကတဆင့်။အဲဒီဘားမားဒိုင်ဂျက် မဲကိ
ဲ့သတင်းသမဂ္ဂကမွတ်စလင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးမောင်မောင်မြင့်+ကိုမင်းကျော်တို့ရှိနေတော့ သူတို့ကိုလည်း မေးကြည့်ရဦးမယ်။နောက်တခုက-ကိုမြအေး ၈၈၈၈ခေါင်းဆောင်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့သံသယကို ၈၈၈၈ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ကို ကျနော်စုံစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်။ကျနော်ကတော့ ၈၈၈၈အညတရအထက်တန်းကျောင်းသားလေး ချာတိတ်ဖြစ်ခဲ့တာမို့ မသိတဲ့ကိစ္စတွေကို သိသူတွေကို ထပ်မံ စုံစမ်းပြီး အဖြစ်မှန်ကို မှတ်တမ်းထားချင်နေတာပါပဲ။
သေချာတာပေါ့ကွာ..ပြည်ပရောက်သွားတဲ့လူတော်တော်များများက လုပ်စားသမားတွေ ဖြစ်နေပြီ...အင်္ဂလန်မှာ ပိုဆိုးတာပေါ့ကွာ...ငါလည်း လန်ဒန်နားက မြို့မှာနေတော့ သူတို့ လုပ်သမျှ ကြားနေမြင်နေရပြန်တယ်...လန်ဒန်က အဖြူကောင်တွေဆိုရင် ဟိုရုံးရှေ့အော် ဒီရုံးရှေ့အော်...အော်ချင်သလိုအော်နေတဲ့ လူတွေကို နှာခေါင်းရှုံ့နေကြပီ
ဒီဆောင်းပါးကို ကျုပ်တို့ဘလော့က ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ သခင်ချစ်အိကို ပင်ပန်းခံပြီး ရေးထားတာကို တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် သခင်ချစ်အိကို ပြောမှသိတယ်လို့ ပြောဆိုချင်းက ပိုမိုပြီးမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယအချက်ကတော့ မြအေးဟာ ၈၈မှာ ကတည်းက ကျောင်းသားမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဘွဲ့ရပြီးသွားပြီလို့ ကိုAung Moe Win က ရှင်းပြဖူးပါတယ်။ ( ကော်မန့်မှာ ဆွေးနွေးထားပါတယ် ) သူပတ်သက်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ကလဲ ကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့တဲ့။ (ဒီမိုကရက်တစ် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရနှင့် ကျောင်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့)။ ကျောင်းသားဟောင်းဆိုတာ ကျောင်းသားမဟုတ်တော့ဘူးလို့ ကိုAung Moe Win ကလည်းရှင်းပြပါတယ်။ ဒီတော့ ကုလားမြအေးကို ကျောင်းသားဟောင်း ခေါင်းဆောင်လို့ရေးခြင်းဟာ သူအလွန်ဆုံးရမယ့် ဂုဏ်ထူးပါပဲ။ အခုတော့ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လို့ခေါ်ပြီး ဦးမင်းကိုနိုင်တို့ရဲ့ အထက်မှာ ရှိနေသယောင်လုပ်ထားပါတယ်။
နောက်ပြီး ဘားမားဒိုင်ဂျက်က ရိုးသားစွာ မဲကောက်တယ်လို့ ထင်လား? ကုလားမြအေးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထက် ပိုပြီးသာတယ်လို့ ဒီအတိုင်းရေးဖို့မသင့်လို့.. ဟန်ပြ မဲကောက်ခံပြီး စင်ပေါ်တင်ပေးတာဗျ။ ခင်ဗျားပဲ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ ခင်ဗျားတို့လို တကယ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေကတောင် ဘယ်သူ.. ဘယ်ဝါမှန်းမသိတဲ့ မြအေးလိုကောင်မျိုးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယှဉ်ပြီး မဲပေးခိုင်းစရာကို အကြောင်းမရှိပါဘူး။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က မဲလိမ်ဖို့ အကြံအစည်း အရင်ကတည်းက ရှိပြီးသားပါ။ ဒီတော့ ဘားမာဒိုင်ဂျက်ကို သွားပြောလဲ သူတို့ရတဲ့ မဲအရေအတွက်အရပြောတာပါဆိုပြီး ဗြောင်လိမ်လုပ်လိုက်ရင် . . . ခင်ဗျား ဘာမှပြောနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
Wikipedia မှာ လူလိမ်မြအေးကို ကုလားတွေ ဘယ်လိုဂုဏ်ဖွဲ့ထားလဲဆိုတာ ဖတ်နိုင်အောင် ဆောင်းပါးထဲမှာ Wikipedia Link ကို ဖြည့်စွပ်လိုက်ပါတယ်။
ခင်ဗျားဟာ တယောက်တည်းဖြစ်နိုင်သလို၊ အုပ်စုတစ်စုဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခုလို အများနဲ့တယောက်ကြားမှာ ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ သတ္တိကိုတော့ ချီးကျူးပါတယ်။
အမှန်ကနေ လွဲချော်မသွားစေဖို့တော့ ဆက်လက်သတိချပ်ပါ။
Dear Ko Oway Aung,
You wrote following on this website http://myanmartruthers.blogspot.com/2010/10/blog-post_13.html
"ခက်တာက အင်တာနက်နည်းပညာတချို့ကို ကျွမ်းကျင်ကြတာက သတင်းသမဂ္ဂက မွတ်စလင်တွေဖြစ်တဲ့ ဦးမောင်မောင်မြင့်+ကိုမင်းကျော်တို့ ရှိနေတော့ သူတို့ကိုလည်း မေးကြည့်ရဦးမယ်။"
For your information: I am notaMuslim, butaBuddhist. I am not upset with you for misquoting me asaMuslim, because your words cannot change the fact that I amaBuddhist. But you must make sure before you put someone's name and background onablog page.
As for me, someone's religious belief is not important as long as that person remains truthful to the cause of democracy, human rights and humanity.
My advice to you is: Please do not trust everything/everyone you read/meet on the internet. Because some people you would find on the internet are hateful people who want to use religion asatool to spread their hatred. Most of the anti-Muslim sites are set up by the Burmese military regime to sow hatred among citizens of Burma who have different opinion and religious belief. If you areatrue democrat, you don't have to hate non-Buddhist people. All people of Burma - no matter their religious belief, are the sons and daughters of Burma. In other words, we all are brothers and sisters. So, let us not hate each other.
(As for me, someone's religious belief is not important as long as that person remains truthful to the cause of democracy, human rights and humanity.)
ပထမဆုံးပြောချင်တာက ငါတို့ကို နအဖ ဘလော့လို့ စွပ်စွဲခြင်းအတွက် အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နအဖဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးပါ။ မြန်မာလို့အပြောခံရတရွေ့ ကြိုက်သလို ပြောနိုင်ပါတယ်။ စိတ်မဆိုးသလို ဖြေရှင်းမှာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။
သခင်ချစ်အိကိုက မြအေး ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မဟုတ်ဘူးလို့ မျက်စိမှိတ်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချက်အလက်တွေနဲ့ အသေအချာရှင်းပြထားတာပါ။ ဒီမိုမီဒီယာတွေကတော့ ဘာအချက်အလက်မှ မပေးပဲ မြအေးကို ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လို့ ဇွတ်အတင်းကြီးကို ပြောနေတယ်။ ခေါင်းဆာင်လဲဆိုသေးတယ် ဘယ်ဒီမိုကမှ မြအေး အကြောင်းမသိဘူးဆိုတော့ ရယ်စရာကြီးဖြစ်နေပြီ။ မြအေးမှာ ၈၈ တုံးက လှုပ်ရှားတဲ့ ဓါတ်ပုံဆိုတာလဲ တစ်ခုမှ မရှိပါလား။ အထောက်အထားတွေနဲ့ တင်ပြထားလျက်နဲ့ အင်တာနက်ပေါ်မှမိုလို့ သခင်ချစ်အိကိုရေးတာကို မယုံဘူးဆိုရင်လည်း မယုံနဲ့ပေါ့။ မြအေးကို ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မျက်ကန်းလက်ခံလိုက်ပါ။ မရှင်းဘူးလား?
ဒီမိုသမားတွေက လူသာ ကွာသွားတယ် အပြောတွေက အတူတူချည်းပါလား? ကုလားတွေကို လူလိုသဘောထားပါလို့ သြ၀ါဒပေးနေလဲ အပိုပဲ။ ကုလား စိတ်ဓါတ် အောက်တန်းကျတာကို တကမ္ဘာလုံးက သိတယ်။ ဒီတော့ ကုလားတွေကို ဒီမိုဘက်တော်သား အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကို အလုပ်နဲ့ သက်သေပြခိုင်းမှပဲ အဆင်ပြေမှာပါ။ နအဖနဲ့ ပေါင်းပြီးလုပ်နေတဲ့ ပလီဆရာတွေရဲ့ နာမည်နဲ့ မွတ်ဆလင်အသင်းတွေကို . . . . ကုလားအချင်းချင်း ၀ိုင်းဝန်းရှုံ့ချပေးကြလေ။ သူတို့ကို ဗီဇာပိတ်ဖို့ လှုပ်ရှားပေးလေ။ အဲဒါမျိုး နအဖဘက်တော်သား ကုလားတွေကို ဆန့်ကျင်ပြရင်.. ဒီမိုကုလားတွေကို ပြောစရာမလိုပဲ လူလိုသဘောထားပါလိမ့်မယ်။ ရှင်တယ်နော်? အခုဟာ သူတို့ ကုလားအချင်းချင်းကျတော့ နအဖနဲ့ ပေါင်းလုပ်နေတာကို မသိဟန်ဆောင်နေတယ်။ နောက်ပြီး မြအေးနဲ့ ကုလားမကို တွန်းတင်ပေးတယ်။ အဲလို ကုလားစုတ်တွေကို လူလိုသဘောထားလို့ဖြစ်ပါ့မလား? ရယ်စရာပဲ. . ၀ါးဟားဟား
p.s. Because some people you would find on the internet are hateful people who want to use religion asatool to spread their hatred . မအေလိုးစောက်ကုလား.. မင်းကို မင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးလိမ်နေတယ်။ မွတ်ဆလင်ကို ဝေဖန်တဲ့ သူတွေကို hateful , hatred ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေကို သုံးတာ ခွေးကုလားတွေပဲရှိတယ်။ မအေလိုး စောက်ကုလား။ စောက်ကျက်သရေတုံးသလို လိမ်ညာတာကလဲ နှစ်ယောက်မရှိဘူး။
( ခုလို အများနဲ့တယောက်ကြားမှာ ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ သတ္တိကိုတော့ ချီးကျူးပါတယ်။ အမှန်ကနေ လွဲချော်မသွားစေဖို့တော့ ဆက်လက်သတိချပ်ပါ။ )
ကျနော်အနေနဲ့ တစ်ခုတော့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့တွေ ဒီဘလော့ကို အလုပ်ထိခိုက်ခံပြီး . . . လူပင်ပန်းခံပြီး လုပ်နေတာဟာ ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့ ချီးကျူး ချီးမွမ်း .. အာပေးစကား . . . တွေကို မျှော်လင့်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရေလိုက်ငါးလိုက် မြှောက်ပင့်တဲ့ စကားကို မက်မောလို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒီဘလော့ဟာ ယုတ်ညံ့တဲ့မွတ်ဆလင်ဝါဒကို အမြစ်ဖြုတ်ရေးကို ဦးတည် လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ မြန်မာအချင်းချင်း ဒီမို , နအဖ , ကရင် , ရခိုင် , ဗမာ , မွန် , ရှမ်း , ပအို့ , ပလောင် , ဓနု , ကယား စတဲ့ တံဆိပ်တွေကြည့်ပြီး ရန်ဖြစ်ပြီး စောက်တင်း ပြောနေတာကို ရပ်တန့်သွားစေ၇န် ရည်မှန်းထားပါတယ်။ ကျုပ်တို့ ဘလော့ဟာ နအဖနဲ့ဒီမို နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ အယူဝါဒတွေကို တိုက်ခိုက်နေသူတွပါ။ ဒီတော့ ကျုပ်တို့ တင်ပြတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။ စဉ်းစားပါ။ မှားတယ်ထင်ရင် ကြိုက်သလို ဆဲလို့ရတယ်။ (တကယ်ကို ဆဲလို့ရတယ်) ဒါပေမယ့် မှန်ကန်တယ်ထင်ရင် အရည်မရ အဖတ်မရ အားပေးစကားတွေ လာမပြောပါနဲ့။ အရေမရ အဖတ်မရတွေကို စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ဒါ့ကြောင့် မွတ်ဆလင် အမြစ်ဖြုတ်ရေး (သို့မဟုတ်) အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ကိစ္စတွေမှာ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် လက်တွေ့ကျကျ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးပါ။ ကျုပ်တို့ကို ချီးမြှင့်းစကားကို ပြောမယ့်အစား ကုလားကို ဆဲပေးပါ။ ဒါမှ မဟုတ် မြန်မာအချင်းချင်း ရန်ဖြစ်နေတာကို ရပ်တန့်အောင် စကားလေး တစ်ခွန်းကိုပြောပေးပါ။
အခုလို တပ်မိသားစုထဲက ပုတ်လို.ပေါ် ဟုတ်လို.ကျော်တာတွေကိုကြား၇တော. နှလုံးသွေး၇ပ်မတပ် တုန်လှုပ်သွားတယ်ထင်ပါတယ် (ဟိဟိ) ကျေးဇူးပြူပြီး ကျမတို.တင်ထားတဲ.ကော.မန်းတွေကို လူတိုင်းမြင်အောင်သတ္တိ၇ှိ၇ှိ ချ့ပြလိုက်ပါလား၇ှင်
ကိုယ်သမီးအ၇ွယ်လောက်လေးက စင်ပေါ်တက် အင်္ဂလိပ်သံကောင်းကောင်းနဲ. မိန်.ခွန်းလေးတွေချွေလိုက်တော. တော်တော်လေးမခံချီမခံသာ ဖြစ်သွားတယ် ထင်ပါ၇ဲ. နာသွားလာဟင် (အုံဖွနော်) မခံချင်ဖြစ်သွား၇င် ဆ၇ာကြီးတို. တပ်မိသားစုထဲက အန်ကယ် ဦးကျော်သိန်း၇ဲ.သမီး နယူးဇီလန်မှာ အထက်တန်းပညာ တွေသင်ကြားနေတဲ. မကြည်ဖြူသန်.ကို ပြန်ချေပခိုင်းလိုက်ပါလား ဘာဖြစ်လို. ၇င်သား၂ ဘက်ဖော်ပြီး အ၇က်ထိုင်သောက်ခိုင်းထားတာလဲ ဒါမှမဟုတ်၇င် အမေ၇ီကန်နိုင်ငံကြီးမှာ နိုင်ငံေ၇းခိုလှုံပြီး ပညာသင်နေတဲ. လက်၇ှိတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ၇ာပြည်.၇ဲ. တူတော်မောင် မြတ်သူဟန်ကို ပြန်ချေပခိုင်းလိုက်ပါလား၇ှင် (ဟိဟိ)
မြန်မာပြည်မှ မျိုးချစ်လူငယ်တစု ဆိုပဲ။ ကော်မန့်လေးရေးဖို့တောင် အသင်းအဖွဲ့ လုပ်ရသလားကွာ? စအိုပေါက် မုဒိမ်းကျင့်ခံထားရတဲ့ ကျွန်ကုလားတွေ . . . . ငါပြောမယ် နားထောင်စမ်း။ ငါတို့မြန်မာတွေ အဲလောက်အထိမတုံးဘူး။ မင်းတို့လုပ်မှ မြန်မာတွေက ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ကော်မန့်လေးရေးဖို့တောင် အသင်းအဖွဲ့ လုပ်ရတယ်ဆိုပဲ။ မင်းတို့က လိမ်ပဲ လိမ်ချင်တာ ဦးဏှောက်ကတော့ တပြားသားမှ မရှိဘူး။ ၀ါးဟားဟား ။ ကုလားမလို အင်္ဂလိပ် စကားမပြောတတ်လို့ မနာလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီး မငယ်နိုင်လဲ အဲလိုပဲ ပြောခဲ့တယ်။ မင်းတို့ကလဲ အဲလိုပဲပြောပြန်ပြီ။ ငါက အင်္ဂလိပ်လို မပြောတတ်ဘူးပဲ ထားပါ။ ဘာအတွက် အင်္ဂလိပ်စကား ပြောနိုင်တာကို အဲလောက်အထိ မနာလိုဖြစ်ရမှာလဲ? အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်လို့ ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာ တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူး။ တရုတ်နဲ့ ဂျပန်တွေ အင်္ဂလိပ်ကို ABC တောင် မရေးတတ်ပဲ ကျိကျိတက်ချမ်းသာနေကြတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်မှ လူထုက စိတ်ဝင်စားတယ်ပြောရအောင် မြန်မာလူမျိုးတွေက အင်္ဂလိပ်လို နားလည်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အတည်မေးမယ်နော်. . အင်္ဂလိပ်လို တတ်ရင် ချမ်းသာတာလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့ . . ..ဘာကြောင့် မနာလိုဖြစ်ရမှာလဲ? မနာလိုဖြစ်ချင်လွန်းလို့… အင်္ဂလိပ်စကား တတ်ရင် ဘယ်လိုအကျိုးရှိမလဲဆိုတာ နည်းနည်းလေးရှင်းပြပါဦး။
သခင်ချစ်အိကိုရဲ့ ဆောင်းပါးဟာ အရမ်းကိုပေါက်တယ်လို့ ပြောရပါမယ်။ ဒီမိုတွေအတွင်းမှာလဲ ဂယက် ရိုက်နေဟန်တူပါတယ်။ လိမ်ဖို့ စောက်ရှက်တပြားသားမှ မရှိတဲ့ ကုလားတွေလည်း မြန်မာဟန်ဆောင်ပြီး ကုလားမြအေးကို ကာကွယ်နေကြတယ်။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ကုလားကတော့ ဘယ်တုံးကမှ မွတ်ဆလင်လို့ ၀န်ခံပြီးပြောရဲတာမှ မဟုတ်တာ။ တောသားဘလော့ကလဲ… ကုလားကို ဘယ်လို နှိက်ကွပ်လဲဆိုတာ အားလုံး သိနေတာပဲ။ မွတ်ဆလင်ဆိုပြီး ပြောလို့တော့ အသားနဲ့ အရိုး တခြားစီပဲ။ ဟဲဟဲ။ သခင်ချစ်အိကိုရဲ့ တာဝန်သိစိတ် . . . ကြိုးစားမှုနဲ့ အမျိုးသားရေးသတိရှိမှုကို အလေးပြုပါတယ် ခင်ဗျာ။
ko mg mg myint,
you can be also write on comment
ကို​လို​နီ​ခေတ်​တုန်း​က​ ​ကု​လား​​-ဗ​မာ အဓိကရုဏ်း​​ ဖြစ်ခါနီး​မှာ​​ သခင်​အောင်ဆန်း​နဲ့​​ သခင်စိုး​တို့​​ ​ခေါင်း​​ဆောင်တဲ့​​ သခင်စစ်စစ်​တွေက​​ ဒီ​ လူမျိုး​​ရေး​​ အ​ဓိကရုဏ်း​ဟာ​ အုပ်ချုပ်ခံ​ ကိုလိုနီနိုင်ငံသား​​တွေကြား​မှာ​ ​သွေး​ကွဲ​အောင်​ ဗြိ​တိ​သျှက​ လုပ်တယ်​ ဆိုတာကို​ ရိပ်မိပြီး​​​၊​ ​အဓိကရုဏ်း​​ မ​ဖြစ်​အောင်​ ​အ​တတ်​နိုင်​ဆုံး​​ တား​ဆီး​ခဲ့​ပါ​တယ်​။​​ ​ဒီ​လို​ ​ပု​ဂဿဂိုလ်​တွေ​ဟာ​​ ​တ​ပါး​​သော​ ​လူ​မျိုး​​၊​​ ​တ​ခြား​​သော​ ​ဘာ​သာ​တွေ​ကို​ ​စော်​ကား​ဖို့​အ​တွက်​ သ​ခင်ဘွဲ့​ကို​ ​ခံ​ခဲ့​တာ​ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး​​။​​ ​ကိုယ့်​လူ​မျိုး​​၊​​ ​ကိုယ့်​နိုင်ငံ​ ​လွတ်​မြောက်​ရေး​ကို ​လုပ်​ဖို့​အ​တွက်​သာ​ သ​ခင်ဘွဲ့​ကို​ ​ခံ​ခဲ့​တာ​ပါ​။​​ ​ဒီ​တော့​​ ​ဒီ​လမ်း​စဉ်​နဲ့​​ ​ဆန့်​ကျင်​တဲ့​​ ​မင်း​ဟာ​ ​သ​ခင်​ ​မ​ဟုတ်​တဲ့​​ ​အ​ပြင်​၊​​ ​လူ​မျိုး​​ရေး​​ ​အ​ဓိ​က​ရုဏ်း​​ ​မ​ဖြစ်​ဖြစ်​အောင်​ ​လှုံ့​​ဆော်​နေ​တဲ့​​ ​စစ်အာဏာ​ရှင်​တွေ​ရဲ့​​ ​အ​သုံး​​တော်​ခံ​ ​ကျွန်​စစ်​စစ်​သာ​ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်​။​
​ဒါ့​အ​ပြင်​​ မင်းဟာ ​မြင့်​​မြတ်​တဲ့​​ ​ဗု​ဒဿဓ​ဝါ​ဒ​ကို​ ​ဆန့်​ကျင်​ပြီး​​၊​​ လူ​သား​ချင်း​​ ​မုန်း​တီး​​ရေး​​ ​သက်​သက်​ကို​သာ​ ​ဝါ​ဒ​ဖြန့်​​ လှုံ့​​ဆော်​နေ​သူ​ ​ဖြစ်​တာ​ကြောင့်​​၊​ ​​ဗု​ဒဿဓ​ဘာ​သာ​ဝင်​ ​စစ်​စစ်​ ​မ​ဟုတ်​သ​လို​၊​​​ မြင့်​​မြတ်​သူ​​ ​တ​ယောက်လည်း​​ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး​​။​
​ဒီ​တော့​​ ​​မင်း​တ​ယောက်​ ​နိုင်ငံ​ရေး​​ ​အ​ဝီ​စိ​၊​​ ​ဘာ​သာ​ရေး​​ ​အ​ဝီ​စိမှာ​ ​ဂျိုး​မ​ကပ်​ချင်​ဘူး​​ ​ဆိုရင်​တော့​​ ​မင်း​ကိုယ်​မင်း​​ ​ပေး​ထား​တဲ့​​ ​ဘွဲ့​ထူး​​တွေ​ကို​ ​ဖြုတ်​ပစ်​ပြီး​​ ​ရိုး​ရိုး​​လေး​သာ​ စာ​ရေး​စမ်း​ပါ​ကွာ​​​​။​
ဒါ​နဲ့​​ ​မြန်​မာလူ​မျိုး​​ကြီး​ဝါ​ဒီ​ဘွဲ့​​ ​ခံ​ထား​တဲ့​​ မင်း​တ​ယောက်​​ ​မြန်​မာ​လူ​မျိုး​​ စစ်​စစ်​ ဟုတ်-မ​ဟုတ်​ဆို​တာ​ကို​တော့​​​ ​မင်း​​ရဲ့​​ ​မာ​တာ​မိ​ခင်​ကြီး​​ကို​ ​မ​မေး​ရ​သေး​လို့​​ ​အ​သေ​အ​ချာ​ ​မ​ပြော​နိုင်​သေး​ပါ​ဘူး​​။​​ ​သိပြီး​ရင်​တော့​​ မင်း​ကို​ ​အကြောင်း​ကြား​လိုက်​ပါ့​မယ်​။​​ ​ဟုတ်​ပ​လား​​။​
​သ​ခင်​စစ်​စစ်​ကြီး​​ (Real Thakhin)
အင်္ဂလိပ်လိုတတ်လို.တော.မချမ်းသာနိုင်ပါဘုး ချမ်းသာချင်လို.လား မြန်မာနိုင်ငံမှာချမ်းသာချင်၇င် စစ်ဗိုလ်ကြီးလူပ်ပေါ. ဒါမှ တ၇ားဝင်ခိုးခွင်. တောင်းစားခွင်. တွင် မကပါဘူး လုသတ်ခွင်. မဒိန်းကျင်.ခွင်. သံယာသတ်ခွင်. ၇မှာပါ၇ှင.် ၇ှင်တို.ကိုသာလူတွေကမနာလို၇မှာပါ ဘာလို.လဲဆိုတော. မြန်မာပြည်ကတိုင်းမှူးကြီးတွေဆို၇င် အလုပ်လုပ်စ၇ာ မလိုပဲ တောင်း၇င်း စားသောက်နေ၇ုံနဲ.တင် ကိုတေဇ တို.ထက်တောင် ပိုချမ်းသာနေသေးတယ် ဒါတောင်မှ မကျေနပ်သေးဘူး တိုင်းမှူးကြီးတွေက ကိုယ်.တူ ကိုယ်သားတွေကို အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေကိုလွတ်ပြီး နိုင်ငံေ၇းခိုလှုံခွင်.တို. ဒုက္ခသည်တို.အဖြစ်ခံယူခိုင်းထားပြီး "သားတို.ေ၇ ခဏ စောင်.ပါကွာ ဘဘခိုးထားတဲ.အထုတ်ကြီးပိုက်ပြှီး လိုက်လာခဲ.ပါ.မယ်" ဆိုပြီး အစီအစဉ် တွေလုပ်ထားကြတာ ၇ှင်တို.ေ၇ာအပါအ၀င်မဟုတ်လား တိုင်းပြည် သစ္စာဖောက် တွေ၇ဲ. အသားထဲကလောက်ကောင်တွေ၇ဲ.
အကြောင်းသိ မြန်မာပြည်မှမျိုးချစ် မျိုးစစ်လုငယ်တစု
☀ ကျွန်ကုလား Real ။ ။ နအဖ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ လှည့်ဖြားပြီး ပြောနေလဲ ကုလားကို ဘယ်သူကမှ လူရာသွင်းမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကုလားစိတ်ဓါတ် အောက်တန်းကျတာကို တကမ္ဘာလုံးက သိနေပြီ။ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေက ကရင်အချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ကို ဖျောက်ပြီး နအဖနဲ့ လက်တွဲတဲ့ DKBA ကို ဆဲခဲ့တယ်။ ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေက ဗမာအချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ထားဖျောက်ပြီး နအဖနဲ့ လက်တွဲတဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေကို ဆဲခဲ့တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ အစွဲကို ဖျောက်ပြီး နအဖနဲ့ လက်တွဲတဲ့ ဆရာတော်တွေကို ဝေဖန်ခဲ့တယ်။ ခွေးကုလားတွေလည်း အများနည်းတူ နအဖနဲ့ လက်တွဲတဲ့ ပလီဆရာတွေနဲ့ ကုလားအဖွဲ့တွေကို ဆန့်ကျင်ရမှာပဲ။ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းမိုလို့ မဆန့်ကျင်တာဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို မှန်တယ်လို့ ထင်သလား? ဖြေပေးပါ။
☀ ကျွန်ကုလား Myanmar ။ ။ ကုလားမ အင်္ဂလိပ်လို တတ်တာကို မနာလိုဖြစ်တယ်လို့ ငါတို့ကို စွပ်စွဲနေလို့… ဘယ်လို မနာလိုဖြစ်ရမလဲလို့ မေးထားတာပါ။ မင်းကော်မန့်မှာ ဖြေထားတာက တလွဲတွေချည်းပဲ။ မင်းတို့ ကုလားတွေက ရုပ်အဆင်းက ကျက်သရေ ကင်းမဲ့သလို.. စကားပြောတော့လည်း အဓိပါယ်မရှိပါလား။ ကလေးကုလားမပြောနဲ့လို့ လူကြီးတွေ ဆုံးမတာ မှန်တယ်ကွာ။ နောက်ပြီး မျိုးချစ်မြန်မာတစ်စုကနေ မျိုးစစ်မြန်မာလူငယ်တစ်စုဆိုပြီး အမည်ပြောင်းလိုက်ပြန်ပြီ။ မင်းတို့ အဖွဲ့က အခုပဲဖွဲ့တယ်. .အခုပဲ အဖွဲ့နာမည်ကို ပြောင်းလိုက်ပြီလား? ချေးကျုံးတဲ့ကုလားပီပီ ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲ။ ၀ါးဟားဟား
Mr ဇော်မျိုးဆိုတဲ. ကျွန်ကြီးေ၇ အင်္ဂလိပ်ကိုအားမကျဘူးဆိုပြီး ဘာကြောင်.များMr ကိုနာမည်အားလုံး၇ဲ.ေ၇ှ.မှာထည်.ထား၇တာလဲ ကြည်.၇တာကျွန်စိတ်မပျောက်သေးဘူးထင်ပါ၇ဲ. အင်္ဂလိပ် သခင်၇ဲ.နာမည်ကို အေ၇ှ.ဆုံးမှာထည်.ထား၇တာပေါ. ကျေးဇူး၇ှိတယ်မဟုတ်လား ငါတို.ကတော. ပြောင်ပြောင်ပဲ မျိုးချစ်မြန်မာ မျိုးစစ်မြန်မာ လူငယ်တစုပဲကွ မင်းတို.လို သံယာတော်တွေကို၇ိုက်သတ်တဲ.မျိုးမစစ်တဲ.ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး မှန်တာကိုပြော၇ဲတယ် မင်းတို.ကို မိုးကြိုးပစ်တော.မယ် ကြံဖွတ် တွေတော. ဗွေဆော်ဦး ခံလိုက်၇ပြီ မင်းတိူ.လက်ကသွေးညှိုနံတွေကို မိုးကြိုးကကောင်းကောင်းသိတယ်ကွ russia မှာလဲ မိုးကြိုး၇ှိတယ်နော် မိုးကြိူးကပစ်၇င်မှန်အောင်ပစ်တယ်နော် မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူး တိုင်းမှူးတွေ၇ဲ.အမှန်အကန်သတင်းတွေကို ငါတို.ချပြလိုက်တော. နင်တို.မ၇ှင်း၇ဲတော.ဘူးမဟူတ်လား တိုင်းမှူးတွေ၇ဲ.အမျိုးတွေက နင်တို.ကုလားဖြူလို.ခေါ်တဲ. အနောက်နိုင်ငံတွေမှာကျွန်တွေသွားလုပ်နေကြတယ်လေ
အကြောင်းသိ မြန်မာပြည်မှမျိုးချစ် မျိုးစစ် လူငယ်တစူ
မင်းတို့တွေက ကုလားမ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကို ငါ့က မနာလိုဘူးလို့ စွပ်စွဲကြတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုတတ်တာကို ဘာအတွက် မနာလိုဖြစ်ရမှာလဲလို့ မေးထားတာကို အခုထက်ထိ ရှင်းမပြသေးပါ။ မဆိုင်တဲ့ စကားတွေပဲ ပြောနေပါတယ်။ ကလေးကုလား စကားတွေ ပြောနေသည်။ ကော်မန့်လေးတစ်ခုကို အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ပြန်ရေးရတယ်ဆိုတဲ့ မင်းတို့ ကျွန်ကုလားတွေကို သိပ်ကို သနားပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးက ကုလားစောက်ကျင့်ကို သိလို့ မင်းတို့ကို လူလိုသဘောမထားတော့ဘူး။ မွတ်ဆလင် အချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ ပလီဆရာတွေနဲ့ ကုလားအဖွဲ့တွေကို ဒီမိုကုလားတွေက မဆန့်ကျင်သေးပါ။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုသမားတွေက ဒီမိုကုလားတွေကို ခွေးကုလားဟု ဆဲနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ဒန်..ဒန်..ဒန်.
ကျမပြန်၇ှင်းပြီးပြီ အင်္ဂလိပ်စကားတတ်တဲ.လူကိုမနာလိုစ၇ာမ၇ှိပါဘူး စစ်ဗိူလ်ကြီးတွေကိုသာမနာလိုစ၇ာပါလို. ၇ှုင်းပြီးပြီလေ ၇ှင်.အဘတွေကို ထိခိုက်လို.ကြောက်ပြီးမဖတ်၇ဲတာလားပြန်ဖတ်ကြည်.အူံး အကြောင်းသိ မြန်မာပြည်မှ မျိုးချစ် မျိုးစစ်လုငယ်တစု
( ကျမပြန်၇ှင်းပြီးပြီ အင်္ဂလိပ်စကားတတ်တဲ.လူကိုမနာလိုစ၇ာမ၇ှိပါဘူး )
ဟားဟား။ ကျမဆိုပဲ။ ကုလားမ ဂျီးကိုး။ ငါက ကုလားမဆိုရင် ရွံတယ်ဟ။ လူက အသက် ၂၁ .. နို့သက်က ၅၀ လောက်ရှိတယ်။ ကုလားမကြည့်ရတာ သူ့အမေ နို့ကို ငှားတပ်လာ တယ်ထင်တယ်။ ဟိဟိ။ အဲလောက်ပဲ ကြီးချင်ရသလားကွာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နင်က “ကုလားမကို မနာလိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ပြန်ရှုပ်သိမ်းတယ်ဆိုတော့ “… ဟဲဟဲ။ တောသား နိုင်သွားပြီပေါ့? ကျေနပ်တယ်။ ဒါက အစပဲရှိသေးတယ်။ မွတ်ဆလင်ကို ငါတို့မျိုးချစ်လူငယ်တွေက တကယ်ကို အမြစ်ဖြုတ်မယ် ဆိုတာ နောက်နေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဒါနဲ့ မွတ်ဆလင် အချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ ပလီဆရာတွေနဲ့ ကုလားအဖွဲ့တွေကို ဒီမိုကုလားတွေက မဆန့်ကျင်သေးပါ။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုသမားတွေက ဒီမိုကုလားတွေကို ခွေးကုလားတွေဟု ဆဲနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ဒန်..ဒန်..ဒန်.
သခင် ချစ်အိကို ပြောတာ မှန်ပါတယ်။ ကုလားဆိုတဲ့ ကောင်က စောက်ကျင့် တစက်မှ ကောင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီမိုနဲ့ နအဖ ကောင်တွေကလဲ ကုလားလိမ်သမျှ အားလုံးယုံတယ်။ မြန်မာအချင်းချင်း ရန်ဖြစ်ဖို့ပဲ လိုလားနေ တဲ့ တိုင်းပြည် သစ္စာဖေါက်တွေပါ။ ဒါပေမယ့် သခင်ရွှေဂျူး ၊ သခင်အောင်ဇေမင်း နဲ့ ကျုပ်တို့ က သခင်ချစ်အိကိုနဲ့ အတူတူ ကုလားတွေကို တိုက်ပေးကြလို့ အခုဆိုရင် ကုလားဖင်ရက်တဲ့သူတွေ အသံမထွက်ရဲတော့ပါဘူး။ ကုလားတွေလဲ ကုလားလို့ ၀န်ခံပြီးပြောရဲသူဆိုတာ မရှိတော့တဲ့ အနေအထားပါပဲ။ သခင်ချစ်အိကိုရေ.. ဒါတောင် ကုလားကို မုံန်းပဲ မုန်းနေပြီး . . . . ဘာမှ မလုပ်ပဲ ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့ မျိုးချစ်မြန်မာတွေက များလွန်းလို့ အောင်မြင်မှုတွေက ရသင့်သလောက် မရဖြစ်နေတယ်။ သူတို့သာ တာဝန်သိစိတ်ရှိလာမယ်ဆိုရင် မွတ်ဆလင်ဆိုတာ မြန်မာ့မြေပေါ်ကနေ မကြာမီ လုံးဝကို ပျောက်ကွယ်သွားမှာပါ။
ငါတို.က နင်သမီးလောက်လေးကိုမနာလိုတဲ.အကြောင်းကိုမ၇ုတ်သိမ်းဘူး တောသား၇ဲ. နင်ကညံတယ် အင်္ဂလိပ်စာမတတ်ဘူးအဲ.ဒီတော.နင်ကမနာလိုတယ် နင်တို.ဇီးကုန်းသား နိုင်ငံခြားေ၇းဝန်ကြီး လူလိမ်ဥာဏ်ဝင်း လဲအင်္ဂလိပ်စာမတတ်ဘူး နင်တတ်တာ ဏှာအကြောင်းပဲတတ်တယ် ဒါကြောင်.နင်တတ်တာနင်ထည်.ေ၇းတာပေါ. နင်တို.မိဘအဆင်.အတန်းကိုငါသိပြီ နင်တို.မိဘကနင်တို.ကိုဘယ်လိုသွန်သင်ဆုံးမထားတယ်ဆိုတာ ငါသိပြီ ငါတို.ထည်.ေ၇းထားတဲ. ကျော်သိန်းသမီး ကြည်ဖြူသန်. ၇ာပြည်.တု မြတ်သူဟန် တို.အကြောင်းတွေကိုတော.နင်ဘာလို.ထည်.မေ၇း၇ဲလဲ ဘာလဲ ကြောက်နေတာလဲ ကုလားဖြူနိုင်ငံတွေကနှင်ထုတ်ခံ၇မှာကြောက်တယ်ပေါ. ကျွန်ခံလို.အခုထိမ၀သေးဘူးထင်တယ်
ကျွန်ကုလား Myanmar (ဟိဟိ)
(တောသား၇ဲ. နင်ကညံတယ် အင်္ဂလိပ်စာမတတ်ဘူးအဲ.ဒီတော.နင်ကမနာလိုတယ်)
ဟ. . ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့လဲ အင်္ဂလိပ်လို မတတ်တာနဲ့ ကုလားမကို ဘာအတွက် မနာလိုဖြစ်ရမှာတုံး? ငါက တောသားဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်စကားကို မပြောတတ်ဘူးလေ။ အဲဒါဘာဆန်းလဲ? ဒို့ရွာမှာက မြက်ရိတ်ပေါင်းသင် လုပ်တတ်ရင် အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်တာထက် ပိုပြီးအကျိုးရှိတယ်။ အဲဒီကုလားမက ငါ့ထက် မြက်ရိတ်ပေါင်းသင် လုပ်တာ ပိုပြီးတော်တယ်ဆိုရင် မနာလိုဖြစ်မှာပဲ။ နောက်ပြီး ငါကိုလျှော့မတွက်နဲ့နော်. .. ငါက ABC ကို ရွတ်ပြနိုင်စွမ်းရှိသေးတယ်။ ဂျပန်နဲ့ တရုတ် သူဌေးကြီးတွေဆိုရင် ABC တောင် ရွတ်နိုင်စွမ်းရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ ကုလားမ အင်္ဂလိပ်လိုတတ်တာ မနာလိုဖြစ်ရမယ်ဆိုရင် . . . . . တောသားလောက်တောင် အင်္ဂလိပ်လိုမတတ်တဲ့ အဲဒီသူဌေးတွေက . . . . . . ကုလားမကို သတ်ချင်လောက်အောင် မုံန်းနေကြမှာပဲ။ ၀ါးဟားဟား။ ဒါနဲ့ မွတ်ဆလင် အချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ ပလီဆရာတွေနဲ့ ကုလားအဖွဲ့တွေကို ဒီမိုကုလားတွေက မဆန့်ကျင်သေးပါ။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုသမားတွေက ဒီမိုကုလားတွေကို ခွေးကုလားတွေဟု ဆဲနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ဒန်..ဒန်..ဒန်.
မင်းက စစ်ပြေးနဲ.၀၇မ်းပြေးမ လယ်ကန်သင်း၇ိုးမှာ ၇မွေးမှန်း ငါအခူမှသိတော.တယ် ဒါကြောင်.အဲ.လောက်၇ိုင်းတာကိုး မောင်၇င်တို.တပ်ထဲက ကျော်သိန်းသမီးနဲ.၇ာပြည်.တူအကြောင်းတို.မောင်၇င်မပြော၇ဲဘူးမလား ကြေးစား စစ်သားတွေဆိုတော. အလုပ်ပြူတ်မှာကြောက်လို.လား မင်းစားနေတဲ.လစာက သန်းေ၇ွှ ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးကွ ပြည်သူတွေ၇ဲ.ချွေးနဲစာ တွေကွ ငါမေးနေတဲ.၇ာပြည်.တူနဲ.ကျော်သိန်းသမီးကိစ္စကို ဘာလို.မင်းမဖြေ၇ဲတာလဲ မင်းအဲ.လိုမဖြေနိုင်တာက မင်း၇ှုံးပြီပေါ. တောသား၇ဲ.
အကြောင်းသိ မြန်မာပြည်မှ မျိုးချစ် မျိုးစစ် လူငယ်တစု
ကုလားမရေ။ မဆဲနဲ့လေဟာ။ စကားပြောရင် ယဉ်ကျေးစမ်းပါ။ ယဉ်ကျေးမှုကို နားမလည်ရင် ငါဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာ လေ့လာပေါ့။ ဟုတ်ပြီလား။ ကဲပါ… ငါအခုရတဲ့သတင်းလေးကို ပြောပြရဦးမယ်။ ABC တောင် မရတဲ့ ဂျပန်သူဌေးကြီးက ကုလားမကို အရမ်းမနာလိုဖြစ်နေတယ်တဲ့။ yakuza အဖွဲ့တွေသုံးပြီး. . ကုလားမကို ဖြုတ်ပြစ်မယ်တဲ့။ ဟဲဟဲ.. သူဌေးကြီးကို အကြမ်းဖျက်တယ်ဆိုပြီးးမတွေးနဲ့နော်.. ကုလားရင်မှာ အဆမတန်ကြီးနေတဲ့ နှိ့ကြီးကို ဖြုတ်ပြစ်မယ်လို့ ပြောတာပါ။ ဒါနဲ့ မွတ်ဆလင် အချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ ပလီဆရာတွေနဲ့ ကုလားအဖွဲ့တွေကို ဒီမိုကုလားတွေက မဆန့်ကျင်သေးပါ။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုသမားတွေက ဒီမိုကုလားတွေကို ခွေးကုလားတွေဟု ဆဲနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ဒန်..ဒန်..ဒန်.
တချိန်တည်း မြအေးကို ၁၉၉၅ (သူမလွတ်ခင်တနှစ်ဒိတ်နဲ့) အကောင်ဆုံးဆုကို ဘားမားဒိုင်ဂျက်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့တခုက ဆုပေးတယ်ဆိုတာ အင်တာနက်မှာ ပြန့်လာတယ်။ ဒီနေရာမှာ သူနဲအကြိုက်အနယ်ပြိုင်ပြီး ခွက်ခွက်လန်ရှံးတဲ့သူတွေ ကြည့်နိုင်တယ်
၁၉၉၅ အစား ၂၀၀၆ ဟုဖတ်ကြ၇န်၊
မင်းကများမ၇်ိုင်းနဲ.လေတဲ. အမလေး ဖိနပ်ခြားကနတ်စကားထွက်နေပါလား မင်းကိုငါမေးထားတဲ.မေးခွန်းတွေကိုမဖြေသေးပါလား မင်း၇ှုံးပြီး၇င်း ၇ှူံ့း၇င်းပါလား
၁) မင်းနာမည်ေ၇ှ.မှာဘာလို. Mr. တပ်ထားတာလဲ
၂) ကျော်သိန်းသမီး အကြောင်းဘာလို.မဖြေတာလဲ
အကြောင်းသိ မြန်မာပြည်မှ မျိုးချစ် မျိုးစစ်လုငယ်တစု
စကားပြောရင် ယဉ်ကျေးစမ်းပါ။ ယဉ်ကျေးမှုကို နားမလည်ရင် ငါဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာ လေ့လာပေါ့။ ဟုတ်ပြီလား။ ABC တောင် မရွတ်တတ်တဲ့ ဂျပန်နဲ့ တရုတ်သူဌေးကြီးတွေက ကုလားမကို အရမ်းကို မနာလို ဖြစ်နေတယ်ဆိုပဲ။ ရုပ်ချောပြီး ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ တောသားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မနာလိုစိတ်က အဲဒီသူဌေးကြီးတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ဆင်နဲ့ ပုရွတ်ဆိတ်လောက် ကွာပါတယ်။ ဆင်လောက်ရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ မနာလိုစိတ်ကိုပဲ ပြောတာက ပိုပြီးသဘာဝကျပါတယ်ကွာ။ ၀ါးဟားဟား ဒါနဲ့ မွတ်ဆလင် အချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ ပလီဆရာတွေနဲ့ ကုလားအဖွဲ့တွေကို ဒီမိုကုလားတွေက မဆန့်ကျင်သေးပါ။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုသမားတွေက ဒီမိုကုလားတွေကို ခွေးကုလားတွေဟု ဆဲနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ဒန်..ဒန်..ဒန်.
သခင်ချစ်အိကိုရေ . . . ၁၉၉၅ အစား ၂၀၀၆ ကို ပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ စကားကို သဘောကျတယ်။ ကုလားမ ဝေနှင်းကို မွတ်ဆလင် အမြစ်ဖြုတ်ရေးမှာ တဖက်လှည့် ပြန်သုံးတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ ကုလားမကို သူတို့ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်း ပြန်ပြီး ရန်ဖြစ်ခိုင်းရမယ်။ ကျုပ်တို့ ကရင်နဲ့ ဗမာတွေကတော့ အချင်းချင်း ပြန်ပြီး ဝေဖန် ရှုတ်ချနေပြီး… သူတို့ ကုလားတွေကတော့ မသိဟန်ဆောင်နေတဲ့ . . . . . . .လူလည်ကြတဲ့ လုပ်ရပ်ကို မီးမောင်းထိုးပြရမယ်ဗျ။ ဒါနဲ့ စကားမစပ်.. ကုလားမ ခုံချမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ သတင်းတွေနဲ့ ဘလော့တွေမှာ ဖတ်မိ.. မြင်မိရင် သတင်းပေးပါဦး။ ကျုပ်တို့တွေ အဲဒီသတင်းပေါ်မူတည်ပြီး လှုပ်ရှားကွက်တွေကို ပြောင်းလဲသင့် ပြောင်းရအောင်လို့ပါ။
မျိုးချစ်စိတ်ရှိသောချစ်အိကိုလုပ်မနေနဲ့၊နင်တို့ဗမာမတွေ english လာလဲဖင်ခံ၊ india ကုလားလာလဲဖင်ခံ၊ဂျပန်လာလဲဖင်ခံ၊ pakistan ကုလားလာလဲဖင်ခံ၊ bangladeshကုလားလာလဲဖင်ခံလိုက်
နင့်ခေတ်ရောက်တော့ခေတ်မှီသွားပြီလေ၊ england,malaysia, thailand,malaysia, china,singapore, amreica ,australia ထွက်ပြီးဖင်ခံကြတာပေါ့
zaw myo>>ချေးကျုံးတဲ့ကုလားပီပီ ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲ။
myanmar yay..thu toe. ka kyoon lae khan phin lae khan ..pee tot pasat ka
tha khin aww, myoe chit sate aww nae.
aww nay tar..
ခေတ်မှီတဲ့ဗမာအားလုံးသုံးတဲ့ burglish တော့မဖတ်တတ်ဘူးလား
ကျွန်ကုလားရေ. . . စိတ်တွေ ဂဏာမငြိမ်ဖြစ် နေတာ မြင်ရတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ။ မိုဟာမက်ဆိုတာ ချေးစားခွေးလောက်မှ အဆင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ အမှန်တရားကို လူပုံအလည်မှာ အပြောခံရတော့ ရူးမတတ်ဖြစ် သွားတာ မဆန်းပါဘူး။ အေး.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မေးချင်တာလေးတော့ ရှိပါတယ်။ ဖြေပေးနော်။ ပြည်တွင်းမှာ နအဖ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်နေတဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံနေတဲ့ ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အသင်းတွေရှိနေတယ်။ ပွဲလန့်တုံးဖျာခင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်ဟာ လူကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီဘူးဆိုတာ မင်းလဲသိပါတယ်။ မေးချင်တာက ဒီမိုကရေစီ လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကုလားတွေဟာ . . နအဖဘက်က မွတ်ဆလင်တွေကို ပြည်တွင်းမှာ ဖျာခင်းတဲ့ ကုလားစုတ်တွေ လုပ်ရပ်ကို မသိဟန်ဆောင်သင့်သလား? ဒါမှ မဟုတ်ရင် တိုင်းပြည် သစ္စာဖေါက် စာရင်းမှာ ထည့်သွင်းပြီး . . . . နောက်ဖက်နိုင်ငံတွေကို ၀င်ခွင့် မရအောင် ဗီဇာပိတ်ပင်ရေး လှုပ်ရှားမှုလုပ်ရင် မကောင်းဘူးလား? ဝေနှင်းပွင့်သုန်က . . ကုလားအချင်းချင်း အပြစ်မတင်ပဲနေတာ မှန်သလား? မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကတော့ နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းတဲ့ သူဆိုရင် သူ့လူငါ့လူမခွဲခြားပဲ ဆန့်ကျင်ခဲ့တာ သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ မင်းတို့ မွတ်ဆလင်တွေက ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ ဖြေပေးပါဦး ။ ဒန်.. ဒန်.. . ဒန်။
ကောင်ဆီက death threat စာတောင်ဆု၇ထားပြီးပြီ။
ဖို.၊ခြိမ်းခြောက်တဲ.နေ၇ာ နော်ဘယ်ဆု တောင်ပေးသင်.
မပူပါနဲ့ကွာ ကုလားတွေဘယ်တော့မှဖင်မခံဘူး ဗမာမတွေပဲခံတာ
မင်းဆို နိုင်ငံခြားမှာကျွန်ခံတာ ၁၂ နှစ်တောင်ကြာပြီမဟုတ်လား
ဖာသည်မရေ ရန်တိုက်တဲ့အလုပ်ကိုနင်ရယ် နင့်အကောင်ရယ်ပဲလုပ်တာ ကျန်တဲ့သူဘယ်သူမှမလုပ်ဘူး
နင့်ဆောက်စိကဖင်ခံရလွန်းလို့မှုန်နေပြီထင်တယ်။ သေချာကြည့်ပါဦးဟ၊ ဗမာကရန်မစပဲတရုပ်ကအလကားနေအလကားရန်ဖြစ်မလား
မင်းတို့ဂေါတမနောက်လိုက်တွေသာအားနေတာလေ အားမှာပေါ့ ဂေါတမနောက်လိုက်တွေလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကြည့်လိုက်ဦး
မိန်းမဆို ခဝါသည်၊ကွမ်းယာယောင်း၊တိုရှည်ရောင်း၊ကချေသည်(ခေတ်အခေါ်တော့ဖာသည် ချစ်အိကိုလိုပေါ့)
ဟေ့ ဂေါတမကမြန်မာပြည်ရောက်လို့ မြန်မာရုပ်ကြီးထုလိုက်တာနဲ့ အညာသားဖြစ်မယ်ထင်မနေနဲ့
ဟိုကောင် မင်းကိုထပ်ပြောမယ် မကျေနပ်ရင်ငါ့လီးကိုပြောင်နေအောင်လာစုပ် ဒါပဲ
ကုလားအကြောင်းမကောင်းပြောသူ = ကုလားဖင်ရှိခိုးသူ = ဇော်မျိုး (မအေဘေး)
ကုလားဗမာရန်တိုက်သူ = ကိုယ်မေကိုယ်လိုးသူ = ဇော်မျိုး ( ဖာခေါင်း)
: မြန်မာတွေကလားမပါရင်အလုပ် မဖြစ်ဘူး စကားမှာတောင်းကလားပါရမှ ကလေးကလား၊ကလေးကလား
: ဗမာဇာတိပြဖို့များများဆဲပါ မျိုးချစ်စိတ်ပြဖို့ဆဲနည်းများများသင်ပါ ပုန်း(ငါ့လိုပုံးပြီးဆဲနော်) ဇော်မျိုး အမျိုးချစ်
: မြန်မာပြည်မှာမနေတာ ၁၂ ကျော်ကြာ လူ့အခွင့်အရေးကိုနားမလည်သေး ဇော်မျိုးမအေဘေး မအေးဘေးလေးသိစမ်းပါ မြန်မာအစတကောင်းကပါ မင်းတို့သိတဲ့ကျန်စစ်သား( ကျန်= လ၊ စစ်သား = ကြယ် ) ကလားစစ်စစ်ဗျား မအေဘေးလေးမမေ့ဖို့ထပ်ြေဦးမယ်ဗျို့ မင်းရှိခိုးတဲ့ဗုဒ်ဒကကလားစစ်ကြီးဗျ
: စကားအရာမှာကလားသာ အနိုင်ရတာပါ နိုင်ငံ့အရေးဝေနှင်းလေး ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပေး အမျိုးသားကျောင်းတည်ထောင်တာ ဦးရာဇတ်ကြီးပါ ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် ဆရာတင်ထား တစ်နိုင်ငံလုံးသိပြီးသား ဘုပြောဘေးထိုင် လဒမှိုင် : ကိုယ့်ဟာကိုယ် သခင်အမည်တပ်ထား ဇော်မျိုးသူတောင်းစား jealousy ချစ်အိကိုနဲ့ ညား ဖာသည်လေးများမွေးမယ်ဗျား
chit ei ko
( ကုလားက မဲပေးတယ်ဆိုပြီး ပြောမနေနဲ့ မင်းတို့အမျိုးတွေအားလုံးက ကြက်ဖွတ်ဖြစ်နေတာ မင်းဆောက်စိကန်းနေလား . . . . ဖာသည်မရေ ရန်တိုက်တဲ့အလုပ်ကိုနင်ရယ် နင့်အကောင်ရယ်ပဲလုပ်တာ ကျန်တဲ့သူဘယ်သူမှမလုပ်ဘူး )
ကော်မန့်ကတော့ အရှည်ကြီးရေးထားပေမယ့် .. တကယ်အနှစ်က စာ၂ကြောင်းပဲရှိတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ ဆဲထားတာချည်းပဲ။ မိုဟာမက်ဟာ လူလိုမနေခဲ့သလို . . သူ့နောက်လိုက် ခွေးကုလားတွေလဲ လူလိုမပြောတတ်ပဲ ဆဲနေတာ မဆန်းပါဘူးလေ။ ၀ါးဟားဟား။ တော်တယ်ကွာ.. ငါတို့အမျိုးတွေက ကြံ့ဖွတ်တွေဆိုတာ ကုလား သိနေပြီကိုး။ ဒါဆိုလဲ . . ငါတို့အမျိုး ကြံ့ဖွတ်တွေလိုပဲ ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို တိုင်းပြည်သစ္စာဖေါက်စာရင်းထဲ မထည့်သင့်ဘူးလား? အဲဒီ မွတ်ဆလင်တွေနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ မောင်နှမတွေတွေ သားသမီးတွေကို အနောက်နိုင်ငံတွေကနေ နှင်ထုတ်အောင် မလုပ်သင့်ဘူးလား ? ဖြေပေးလေကွာ။ ခွေးကုလားအချင်းချင်း ရန်တိုက်တယ်လို့တော့ မပြောနဲ့။ ဒီမိုဘက်တော်သားဆိုရင် နအဖနဲ့လက်တွဲတဲ့ကုလားတွေကို ရန်သူလိုသဘောထားရမှာပဲ။ ဒီမိုဘက်တော်သား သခင်ကရင်တွေက . . . သခင်ကရင်အချင်းချင်း DKBA ကို ရန်သူလိုသဘောထားရင်.. မင်းတို့ စောက်ကုလားတွေလဲ အချင်းချင်းရန်သူလို သဘောထားရမှာပဲ။ ကျောသားရင်သား မခွဲခြားရဘူးဆိုတဲ့ မြန်မာ့စကားကို ကြားဖူးလား…. လူကျင့်ဝတ်ဆိုတာရော ကြားဖူးလား? စောက်ကုလား.. ဖြေစမ်းကွာ။
သခင်ချစ်အိကိုရဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ တာဝန်သိစိတ်ကို အရမ်းလေးစားမိပါတယ်။ ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေက ဒီမိုနဲ့ နအဖ တံဆိပ်ကြည့်ပြီး အမုန်းအဃာတတွေ ကြီးနေကြတယ်။ မြန်မာအချင်းချင်း နှိပ်ကွပ်ရမယ်ဆိုရင် ကုလား၊ တရုတ်၊ အဖြူတွေကို ပထွေးတော်လိုက် မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေဗျ။ အဲဒါကိုသိလို့ ကုလားတွေက ၂ ဖက်စလုံးမှာ လှည့်ပတ်ပြီး နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်နေတာပါ။ အခုဆိုရင် ကုလားက ပြည်တွင်းမှာ နအဖနဲ့ ပေါင်းတယ်.. ပြည်ပမှာတော့ ဒီမိုတွေနဲ့ပေါင်းပြီး မွတ်ဆလင် လွှမ်းမိုးရေးကို အကွက်ချ ဖန်တီးနေတယ်။ သခင်ချစ်အိကိုလုပ်သလို နအဖလက်ကိုင်ဒုတ် ကုလားတွေကို အရေးယူဖို့ စာတွေဖြန့်ဝေပြီးလုပ်တာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကျုပ်တို့ သခင်မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ နအဖနဲ့ လက်တွဲတဲ့သူဆိုရင် ဗမာအချင်းချင်း.. ကရင်အချင်းချင်း .. မွန်အချင်းချင်း . . ရှမ်းအချင်းချင်း . .ဗုဒ္ဓဘာသာ အချင်းချင်းဆိုတဲ့စိတ်ထားမရှိပဲ လုပ်သင့်တာကို ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ကြတယ်။ စောက်ကုလားတွေက ဘာမိုလို့ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ကုလားတွေကို သက်ညှာနေတာလဲ? အဲဒီပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို တိုင်းပြည် သစ္စာဖေါက်စာရင်းသွင်းရမယ်။ သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို အနောက်နိုင်ငံတွေကနေ နှင်ထုတ်ဖို့ လှုပ်ရှားသင့်တယ်။ အဲဒီလုပ်ရပ်ကို ဒီမိုဘက်တော်သား အမည်ခံထားတဲ့ ကုလားမနဲ့ ကုလားတွေကိုယ်တိုင် လုပ်ရမယ်။
ကျနော်ကတော့ သခင်ချစ်အိကို အကြံပြုတဲ့ အီးမေးလ်ဖွင့်ပြီး လုပ်ကိုင်မှုကို တိုးမြှင့်ဖို့ဆိုတာ လောလောဆယ်ဆယ်မှာ မဖြစ်သေးဘူး ထင်တယ်။ သခင်ချစ်အိကို သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဘလော့လောကဆိုတာ နိုင်ငံရေးမှာ တော်တော်ကို အရေးပါတဲ့ အနေအထားဖြစ်နေတယ်။ အခုတောင် အလုပ်မှာ တာဝန်ပျက်တာတွေနဲ့. . . လူမှုရေးကိစ္စတွေကို မေ့ထားပြီး ဘလော့ဘက်ကို လုပ်နေရတာဗျ။ တကယ်လို့သာ ကျနော် ထပ်တိုးချဲ့ရင် ဘလော့ဘက်ကို သိပ်ပြီး အာရုံစိုက်နှိင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ထပ်တိုးချဲ့ဖို့ဆိုတာ ကျနော် မနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်.. သခင်ချစ်အိကို။ ( ကုလားကို မုန်းနေ၊ ဒေါသထွက်နေပြီး တကယ်မွတ်ဆလင် အမြစ်ဖြုတ်ရေးမှာ မကူညီတဲ့ မျိုးချစ်တွေကို . . . ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ဖျောက်ပြီး အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် ကူညီဖို့တောင်းဆိုပါတယ် )
နောက်ပြီး ကုလားတွေ ခြိမ်းချောက်တာကိုလဲ မကြောက်ပါနဲ့။ တကယ်တမ်းကြောက်ရမှာက ကျုပ်တို့ မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်တို့က အိမ်ရှင်တွေဗျ။ ဒီကောင်တွေက ကျုပ်တို့ရဲ့ အိမ်မှာ ခိုကပ်နေတဲ့ ခွေးသူတောင်းစားတွေပါ။ တကယ်တော့ အဲဒီကောင်တွေက ကြောက်ရမှာပါ။ ကျုပ်တို့ အိမ်ပေါ်မှာ ခိုကပ်နေပြီး ကျုပ်တို့ကို စော်ကားနေတာ မြန်မာအချင်းချင်း စည်းလုံးမှုမရှိလို့ပါ။ ကျုပ်တို့တွေ အချင်းချင်း ဒီမို၊ နအဖ၊ ကချင်၊ ကယား၊ ဗမာ ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပလောင် ၊ မွန်ဆိုတဲ့ ခွဲခြားစိတ်တွေ ပပျောက်ပြီး… စည်းလုံးလာရင်.. ဒီကောင်တွေရဲ့ ဆိုးပြစ်တွေကို ပြန်ပြီးရော်ကြေးတောင်းကြတာပေါ့။ ဘယ်လောက်တောင်းသင့်လဲဆိုတာ . . . နောက်တော့ တွေးကြ..ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဗျာ။
ဒီကုလားပြောတာ ဆဲတာ တွေတာ ကူးပြီး
ကျွန်ကုလားရေ … မွတ်ဆလင်တွေက သူများတွေအိမ်မှာ ခိုက်ပြီး အိမ်ရှင်တွေကို စော်ကားတဲ့ လုပ်ရပ်က ဆန်းတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ကုလားကို ဘယ်နိုင်ငံကမှ မကြည်ဖြူတော့ဘူးဆိုတာ မင်းလဲသိပါတယ်။ ကဲပါ… ကလေးကုလား အဓိပါယ်မရှိဆဲပြီးရင် နအဖကျွေးတဲ့ အရိုးကိုက်တဲ့ ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ သားသမီးတွေကို ဘယ်တော့ အနောက်နိုင်ငံကနေ နှင်ထုတ်ဖို့ လှုပ်ရှားမှု စတင်မလဲဆိုတာ ဖြေပေးဦးနော်။ နအဖ ကျွေးတဲ့ အမဲရိုးကို ကိုက်နေတဲ့ ပလီဆရာတွေကို သစ္စာဖေါက်စာရင်းထဲမှာ ထည့်ဖို့ ကိစ္စ ဘယ်ကုလားက တာဝန်ယူမလဲဆိုတာလဲ ဖြေဦးလေ။
ဘာလုပ်မှာလဲ လီးစုပ်မှာလား ဖင်ခံမှာလား
"မင်းတို့ဖတ်တဲ့ အပေါစားနိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေမှာ မွတ်ဆလင်မှာ လူဆိုးလူကောင်းရှိတယ်ဆိုပြီး ရေးထားတာကို လက်ခံတယ်မဟုတ်လား?
ဒါဆိုရင် နအဖ စစ်ဗိုလ်တွေမှာလဲ လူဆိုး လူကောင်းရှိတယ်ဆိုတာ လက်ခံပါ။ ရှင်းလား?
နအဖ စစ်ဗိုလ်တွေမှာလဲ လူဆိုး လူကောင်းရှိတယ်ဆိုတာ လက်ခံတယ်ဆိုရင်မွတ်ဆလင်မှာ လူဆိုးလူကောင်းရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံပါ
ကုလားအမျိုးပြုတ်ဖို့ ဂေါတမကုလားလို ဘဝပေါင်းများစွာကျင်လည်လိုက်ပါအုံး(သနားတယ်ဇော်မျိုးရယ်)
ကုလားအမျိုးကို ဖြုတ်နိုင်မဲ့နေ့ကိုအတိအကျလေးဘလော့မှာရေးပြပါလား (စောင့်ကြည့်အုံးမယ်ဇော်မျိုးရယ်)
ဇော်မျိုးအရှေ့မှာ သခင်တပ်ကာ အဟုတ်လုပ်နေတာ
စိတ်ဓာတ်ကတော့ ကျွန်စိတ်လေး လုံးဝမကုန်သေး
စကားပြောရင် သူလိုရာ ဆွဲလို့ယူတတ်တာ
ဂုဏ်ယူကာ တစ်အားတွေပွါး ဂေါတမကုလားရဲ့အကြောင်းများ
အဲဒါ လား သခင်တို့ရဲ့ဘုရား
(နအဖ စစ်ဗိုလ်တွေမှာလဲ လူဆိုး လူကောင်းရှိတယ်ဆိုတာ လက်ခံတယ်ဆိုရင်မွတ်ဆလင်မှာ လူဆိုးလူကောင်းရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံပါ)
စစ်ဗိုလ်တွေထဲမှာ လူကောင်းရှိတယ်လို့ လက်ခံရင် မွတ်ဆလင်မှာ လူကောင်းရှိတယ်လို့ လက်ခံရမယ်? ကုလား. .ကုလား.. မင်းတို့တွေရဲ့ မျက်နှာတွေက ကျက်သရေမရှိသလိုပဲ.. အရှက်ကလဲ မရှိဘူး။ မွတ်ဆလင်လို စစ်တပ်မှာ မုဒိမ်းကျင့်.. လူသတ်ဖို့ တိုက်တွန်းချက် လုံးဝမရှိဘူး။ Quranကျမ်းမြတ်ဆိုပြီးပြောတယ်.. သင်ကြားချက်က မုဒိမ်းကျင့် လူသတ်ဖို့ချည်းပဲ။ ဦးသန်းရွှေဟာ မိုဟာမက်လို ကြာကူလီလည်း မဟုတ်သလို. .မုဒိမ်းကောင်လဲမဟုတ်ဘူး။ ဦးသန်းရွှေနဲ့ မိုဟာမက်ဆိုတာ နံ့သာနဲ့ချေးလိုကွာတယ်ကွ။ နအဖ စစ်ဗိုလ်တွေ ကိုးကွယ်တဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတာ လူကျင့်ဝတ်ပေတံနဲ့ ကြိုက်သလိုတိုင်းလို့ရတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေ ကိုးကွယ်တဲ့ မိုဟာမက်ဟာ ချေးစားတဲ့ခွေးလောက်တောင် မြင့်တဲ့ကောင် မဟုတ်ဘူး။ မြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့ မိုဟာမက်ဟာ အကျင့်စာရိတ္တနဲ့ ဥာဏ်ပညာမှာ နှိုင်းယှဉ်ပြောလို့တောင် မရတဲ့အနေအထားဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်ကွာ။ အဲလို အခြေအနေမှာ မင်းက စစ်ဗိုလ်ကို မွတ်ဆလင်နဲ့ နှိုင်းပြီးပြောရဲတယ်? ၀ါးဟားဟား.. ကုလား.. ကုလား.. စောက်ရှက်ကတော့ တကယ်ကို နည်းသကိုး။
ဟေ့ကောင် စောက်ကုလား။ နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေကို ဆဲဖို့.. မွတ်ဆလင် အသင်းတွေကို ဆဲဖို့ကြတော့ ဒီမိုမြန်မာတွေက လုပ်ရမယ်ဆိုပဲ။ ကုလားအချင်းချင်း အပြစ်မတင်ချင်ရင် .. မြန်မာလူမျိုး နအဖကို လီးမိုလို့စောက်တင်း ပြောနေတာလား? ဟဲဟဲ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ပလီဆရာတွေရဲ့ သားသမီးတွေကို နှိပ်ကွပ်ဖို့ မင်းက သဘောတူတယ်ဆိုတာကိုတော့ သဘောကျတယ်။ မွတ်ဆလင် အချင်းချင်း စပြီးကွဲပြဲလာတဲ့ သဘောပဲ။ ၀ါးဟားဟား။
ကိုဇော်မျိုးပြောတာ လုံးဝ သဘောတူပါတယ်။ ဒီအဖြစ်ကို ဒီမိုကရေစီအတွက် လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေမှာ မေးခွန်းထုတ်ရမယ်။ ဖော်ဝပ်ဒ် မေးလ်တွေပို့ ရမယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို သက်ဆုံးရှည်စေမဲ့ မည်သည့်ထောက်ခံမှု့ မျိုးကိုမဆို ရှုပ်ချ ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီပြည်တွင်းက မွတ်စလင်တွေ စစ်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံနေတာကို ဘာ့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီကို လိုလားပါတယ်ဆိုတဲ့ ပြည်ပက မွတ်စလင်တွေက ဘာ့ကြောင့်လေသံမဟပါသလဲ။ လုံးဝကို ရှုပ်ချရမှာဖြစ်တယ်။ သူတို့ က စစ်အစိုးရနဲ့ ပေါင်းနေကြတဲ့အတွက် ရှုပ်ချရမှာဖြစ်တယ်။ အမှန်တရားကို ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူများ၊ အမှန်တရားကို လိုလားတဲ့သူတွေဟာ ပြည်တွင်းက မွတ်စလင် တွေ ကိုရှုပ်ချရမှာဖြစ်တယ်။ ဘာ့ကြောင့်နှုတ်ဆိတ်နေကြပါသလဲ???????????????
ပေါရဲ ကြောင်ရဲ ရေးရဲ လိမ်ရဲလိုက်တာ
ငါစိတ်ဝင်စားတာက နိုင်ငံခြားမှာ ဖင်ခံကျွန်ခံပြီး သခင်အော်လိုက်
ကုလားမျိုးဖြုတ်မယ်လို့အော်နေတဲ့ မင်းတို့လိုကောင်တွေကို ဆဲဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားတာ
ကျွန်ကုလား myanmar နဲ့ ကျွန်ကုလား olympic
ကလေးကုလားစကားကို ဘယ်သူမှ မယုံဘူး။ အလုပ်နဲ့သက်သေပြပါ။ သခင်ကရင်တွေက နအဖနဲ့ ပေါင်းတဲ့ DKBA ကို ဆန့်ကျင်တယ်.. ဆဲတယ်။ သခင် ဗမာတွေက နအဖရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံတဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေတို့လို လူတွေကို သုံးမရအောင်ဆဲခဲ့တယ်။ သခင်တွေရဲ့ နိုင်ငံမှာ နေတဲ့ မင်းတို့ကောင်တွေလဲ . . . . နအဖဆီက အခွင့်အရေးယူပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံနေတဲ့ ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သားသမီးတွေကို အနောက်ဖက်နိုင်ငံတွေကနေ နှင်ထုတ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို မင်းတို့ကိုယ်တိုင် လုပ်ပြပါ။ အဲလို လက်တွေ့ လုပ်ပြမယ်ဆိုရင် မင်းတို့တွေကို လူတွေက လေးစားလာမှာပါ။ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ထားနဲ့ ဘာမှ မလုပ်ပဲ အခုလို ကလေးကုလား လျှောက်ပြောနေမယ်ဆိုရင် . . . အလကားပဲ။ ရှင်းတယ်နော်?
ကုလားရေ။ မင်းက ပလီဆရာတွေကို သန်းရွှေအောက်ဆွဲ လုပ်နေလားဆိုပြီး စောင်းပြောနေတာ မဟုတ်လား? အဲလိုမပြောရဘူးလေ။ ဘာသာခြားတွေကို သတ်ဖြတ် ၊ ဒုက္ခပေးဖို့ Quran က အတိအလင်းဆိုထားတာပဲ။ တမန်တော် မိုဟာမက်ဟာ သူ့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်အဖိုးနဲ့ ဦးလေးကို ဆဲခဲ့တာပဲ။ တမန်တော်ကြီး ကျေးဇူးကန်းတာကိုလဲ စံနမူနာယူရမယ်။ Quran ကျမ်းနဲ့အညီ ဘာသာခြားဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို ဒုက္ခပေးတာ . . ပလီဆရာတွေအတွက်. . ကုသိုလ်ရတယ်။ မိုဟာမက်ကျေးဇူးကန်းတာကို အတုယူပြီး . . . ကုလားတွေ ခိုကပ်ပြီးနေတဲ့ အိမ်ရှင်တွေကို ကျေးဇူးကန်းပြီး . . . စစ်ကျွန်ရှည်အောင် နအဖနဲ့ အတူတူလုပ်ပေးတာကိုလဲ ဘာသာရေး လုပ်တယ်လို့ မြင်ရမယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပလီဆရာတွေကို သန်းရွှေ အောက်ဆွဲနေတယ်။ သန်းရွှေ ဘောစုပ်နေတယ်။ သန်းရွှေဖင်ကို ရက်နေတယ်ဆိုပြီး မပြောအပ်ဘူး။ ပလီဆရာတွေ ကုသိုလ်လုပ်နေတယ်လို့ ပြောပါလေ။ ၀ါးဟားဟား
သန်းရွှေအောက်ဆွဲ=မြင့်မြတ်သည့်မဟာမြန်မာဝါဒီသခင်ကြီး Mr. ★ဆရာဇော်မျိုး★
ကလေးကုလား ပြောနေတာကို . . .သခင်ဖြစ်တဲ့ငါက အခုလောက် ဂရုစိုက် ပြန်ပြောနေတာ လွန်လှပြီ။ မင်းဖာသာရေးချင်သလောက်ရေးပါ။ မင်းတို့ ကုလားတွေ ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်တာကို မြင်တဲ့ မြန်မာတိုင်းက ၀မ်းသာကြမှာပါ။ ကြိုက်သလောက်ရေးပါ။ အလုပ်ဆက်လုပ်လိုက်ဦးမယ်။ ၀ါးဟားဟား
မင်းပြောတာကို မြင်ရတော့ . . zaw myo စကားကို ဘာကြောင့်လူတွေက အလေးမထားလဲဆိုတာ… သဘောပေါက်သွားတယ်။ ၀ါးဟားဟား
အကြောင်းသိ မြန်မာပြည်မှ မျိုးချစ်မျိုးစစ် လူငယ်တစု
စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ် ကျွန်ကုလား myanmar
ကလေးကုလား ပြောနေတာကို . . .သန်းေ၇ွ ကျွန်ဖြစ်တဲ့ငါက အခုလောက် ဂရုစိုက် ပြန်ပြောနေတာ လွန်လှပြီ။ မင်းဖာသာရေးချင်သလောက်ရေးပါ။ မင်းတို့ ကုလားတွေ ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်တာကို မြင်တဲ့ မြန်မာတိုင်းက ၀မ်းသာကြမှာပါ။ ကြိုက်သလောက်ရေးပါ။ အလုပ်ဆက်လုပ်လိုက်ဦးမယ်။ ၀ါးဟားဟား
မြင့်မြတ်သည့်မဟာသန်းေ၇ွဝါဒီကျွန်ကြီး Mr. ★ဆရာဇော်မျိုး★
အလာ့ အဖေ အလိုး..ကုလားနှမလိုးမယ့်မျိုး said...
မင်းက ကလေးကလား နှင့် ကလေးကုလား တောင်မသိတဲ့ကောင်က မင်းအမေလူတကာလိုးလို့့ဂုဏ်ယူနေတာလား?
ဝေနှင်းပွင့်သုန် English လိုပြောတာကိုဂုဏ်ယူရအောင် မင်းကနားလည်လို့ လား.....Accent တောင်မရှိတဲ့ဟာကို
Accent ဆိုတာကောမင်းသိလို့ လား?စောက်ကုလားရဲ့ 
ီDictionary ကြည့်မလို့ လား နှမလိုး?
ကုလား တက်ခေါက်ရင်မြန်မာတွေ ထတာ မင်းတို့ ကိုမေတ္တာပို့ မလို့ ကွ....မင်းတို့ တွေမနက်စောစော ပလီထဲမှာ လူတကာက ဖင်ဝိုင်းချလို့အားအားအားအော်
နေတဲ့အသံကြားလို့ ထတာကွ....အဲဒါကြောင့် ကုလားက
တက်ခေါက် တယ်လို့ ပြောတာ...ခေါက်မှာပေါ့ကွာ..
မင်းတို့ လိုပြောကြကြေးဆိုရင် မင်းတို့ ကုလားမတွေ
မျက်နှာတွေကို မပြရဲဘဲ ဖုံးထားတာ မြန်မာတွေလီးနဲ့ ဝိုင်းထိုးမှာစိုးလို့ လား ဒါမှမဟုတ် ထိုးပြီးသားဒဏ်ရာတွေကို ကိုမေကိုယ်လိုး အလာ မြင်မှာစိုးလို့ လား......ဒါမှမဟုတ် ဖာသယ်မသား မိုဟာမက် မြင်မှာစိုးလို့ လား..အေးပေါ့ကွာ သူတို့ မြင်သွားရင်တင်းပြီး ခံရကောင်းလားဆိုပြီး သူတို့ ကပါ
မင်းတို့ ဘုရား နံမည်ကိုလဲကြည့်အုံး ..ဘာတဲ့( အလာ)ကောင်းကွာ..
မိန်းမတွေ ရာသီလာတာကိုတင်စားပြီးအလာလို့ မှည့်တာလား..
စမ်းကြည့်မလား..မင်းအမေ နဲ့ မင်နှမ ကိုလွှတ်လိုက်
ငါလိုးမ ကုလားမသားရဲ့ ...
မင်းတို့ ဖာသယ်လမ်းညွှန် Koran ထဲမှာပဲပါမယ်..
သေရင်တောင်မြန်မာသင်္ဂျိုင်းမှာ မချရဲဘူး
မင်းတို့ ကုလားတွေစောင်းတဲ့ Skull cup တွေကကော
မြန်မာတွေ လီးနဲ့ ခေါင်းခေါက်မှာစိုးလို့ လား ?
မင်းတို့ က လထစ်တော့တော်တော်ကြိုက်တယ်နော်
ပလီ မှာတောင် လထစ်ပုံလုပ်ထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား?
သူငယ် fucking ချင်း ကုလားဖင်ပြဲရေ..
ငါတို့ ကမင်းတို့ ကိုချစ်နေတာကွ....
အိမ်ပြန်ရောက်ရင်မင်းနှမ နဲ့ မင်းအမေ ကိုပြောပြလိုက်နော်....